Ny vehivavy Izay Nifindra noho ny Fitiavana Hizara ny Zavatra Nitranga Manaraka ny Fahasalaman'ny Vehivavy
ny lehibe tantaram-pitiavana, ‘avia hiaraka amiko’ ny fihetsika. Efa ho ny antsasaky ny vehivavy izay efa nifindra tany noho ny fitiavana, dia tsy dia lehibe, araka ny fanadihadiana vaovao. Ny tokantrano nanaovana fanadihadiana, ny olona mba hahitana ny fomba maro no nifindra toerana noho ny fifandraisana sy ny zava-nitranga rehefa avy. Raha ny fandehany, mampihetsi-po ho amin’ny hafa manan-danja kokoa mahazatra noho ny mety hieritreritra ianao. Efa ho iray amin’ny dimy namaly no nitatitra fifandraisana famindran-toerana sy ny fahatelo ireo no efa nanao izany, mihoatra noho ny indray mandeha. Ny vehivavy dia nitatitra ny maha-kely kokoa ny hifindra noho ny lehilahy. taorian’ny hetsika, valo ambin’ny folo isan-jato no nilaza fa namindra tsy nahavita afa-tsy ny rocky fifandraisana, fito ambin’ny folo isan-jato tsy tia ny toerana vaovao, ary iraika ambin’ny folo lahy isan-jato na dia raiki-pitia amin’ny olona iray hafa. Farany, ny momba ny hoe aiza ny soatoavina lainga. ‘Ny hany zavatra mety hampitokiky ahy, nifindra dia ny fitiavana, ny’ Loza hoy izy. ‘Eo amin’ny fiainako, dia tsy mieritreritra fa ny asa dia ampy ny antony mba handeha na aiza na aiza fifandraisana izay mamaritra ny toerana misy ahy. Amin’ny teny hafa, tsy menatra raha toa ka ianao ve te-hifindra ho tia na dia miasa avy na tsia. Dia nifindra tany manerana ny firenena nandritra ny fifandraisana. Niresaka be dia be, mialoha, nandritra, ary taorian’ny mba ho azo antoka ny hetsika dia be momba ny toerana vaovao toy izany dia momba azy. Izay no tsara, satria isika nizara tamim-pirahalahiana ny roa taona taty aoriana. Aho, fa mbola loha-ny-handimby-pitia amin’ny Pasifika Avaratra andrefana, namana, sns, ny hetsika manerana izao tontolo izao. Adinony ny hoe izy no tiako efa nahita olon-kafa.
Naka raha ny lalàna ny lalana miverina avy izay iray. Ny iray amin’ireo torohevitra kely: TSY hifindra ho mpiara-miasa. ‘Izaho sy ny vadiko dia nivady, fa velona ao amin’ny isan-karazany ny Amerikana-tanàna izy rehefa nahazo nanolotra asa ao Rwanda. Izy dia nifindra aho ary nanaraka ny iray volana taty aoriana, ka tao ambadiky ny nofy asa. Ny hetsika nanosika ahy ho mihazakazaka ny sary filmmaking raharaham-barotra amin’ny fotoana feno, ary aza aho, dia tena manahy momba ny fahazoana asa, izany rehetra izany dia nivadika tsara kokoa noho andrasana. Dimy taona taty aoriana ary aho mbola mihazakazaka ny raharaham-barotra amin’ny fotoana feno. te. Nanana fianakaviana eto sy ny tsy. Soa ihany, ny mahagaga lavitra fianakaviana nanampy ahy hahazo an-trano eto, rehefa nisaraka izahay. Takeaway dia ny fandanjalanjana ny hery dia tena fijery diso any amin’ny mpiara-miasa amin’ny ara-bola lehibe kokoa fiarovana sy ny fifandraisana ao an-tanàna (fanahy, heveriko fa). Fa tsy manenina aho ny hetsika, raha ny marina. Tsy maintsy mamboly be dia be ny fahaleovan-tena sy ny ny fahamatorana taorian’ny aho tokan-tena indray.
‘Nanao izany aho fony aho
Dia mangovitra ny mieritreritra ny zanako vavy manao izany. Nifindra avy any Boston Los Angeles miaraka amin’ny olon-tiany tamin’izany fotoana. Tsy hiaina am-pifaliana hatrany miaraka aminy, nefa izaho no hihaona ny vadiko any Los Angeles ny dimy taona rehefa nifindra any. ‘Dia nifindra tany amin’ny oniversite olon-tiany manerana ny fanjakana, avy any Pittsburgh ny Philadelphia. Tsy fantatro ny fanahy ao Philadelphia, tsy mbola nonina tany, na dia nitsidika mihoatra ny in-droa. Tsy manana asa miandry ahy, na. Rehefa manao jery todika, dia toa toy ny rehetra lotta moana. Taona vitsivitsy voalohany ireo mikitoantoana. Te-hanambady sy tsy nahita izy, ka isika dia any amin’ny limby. Tsy dia heveriko fa indray andro izany, fa izany dia mety, fa niara-niasa avy ao amin’ny farany. Izahay no nivady roa-polo taona izao, miaraka amin’ny ankizy roa. ‘Izaho dia nahazo diplaoma avy amin’ny oniversite, sy ny enina andro taty aoriana dia nifindra avy Iowa mba Colorado mba ho akaiky ny zazalahy aho nihaona any Meksika tamin’ny lohataona aina. Nilaza ny olona rehetra izay mihaino fa ny nampihetsi-po nanana na inona na inona atao amin’ny zazalahy kely (ao anatin’izany ny azy). Efa tsy misy asa, tsy misy fanantenana, tsy misy toerana ho velona, ary ny momba ny dolara enin-jato bucks am-paosy. Nivady izahay, ary manana tsara tarehy -taona ny vavy. ‘Izaho dia nihaona tamin’ny lehilahy online ao amin’ny Yahoo Personals hiverina any rehefa tsy misy olona ampiasaina an-tserasera ny fiarahana ary nifindra avy any Florida mba Raleigh. Efa nivady izahay sivy ambin’ny folo taona izao, ary manan-janaka roa. Nianatra aho fa tsy mendrika ny fandraisana ny fahafahana amin’ny zavatra izay toa adala ny olon-drehetra. Afa-tsy, ianao afaka foana hifindra toerana indray. ‘Nifindra manerana ny firenena sy ny sisa ny asa tiako ho an’ny vadiko ny miaramila asa, afa-tsy ny volana maro rehefa nivady izahay. Efa ho taona iray izao ary azoko mbola vao miezaka ny mamantatra zavatra, fa izaho efa nianatra zavatra betsaka momba ny tenako sy ny momba ny fifandraisana nandritra izany fotoana izany. Efa-taona ny fahazavan-tsaina, miatrika, ny fanekena, ny fianarana, ary tsy mitsaha-mitombo. amiko volana vitsivitsy taty aoriana satria toa tia ahy tsara kokoa ny fony aho mbola lavitra loatra mba jereo tsy tapaka. Fa izy dia nifindra niala ela lasa izay, raha mbola miaina eto sy ny fitiavana izany. Mino aho fa nahazo tsara kokoa ny farany ny ny fifanarahana. ‘Nifindra avy any Pennsylvanie, any Kalifornia. Isika efa miara-dimy ambin’ny folo taona, manambady sivy, ary folo taona lasa izay dia nisintona azy indray Pennsylvania. Ny fiainana dia loza sy ny fandraisana mety ho faly aho tsy misy nenina. ‘Dia nifindra tany Norfolk, Virginia, izay tsy mbola nisy, ho an’ny ny fifandraisana izay tena mbola vaovao, fa tena mafy sy henjana. Nisaraka izahay folo volana taty aoriana, ary dia nitandrina ny trano. Aho eo am-panaovana ny mpivarotra amin’izao fotoana izao, telo taona taorian’ny isika nividy azy izany, amin’ny goavana very. ‘Izaho noravàna ny fiainako mba hifindra any Costa Rica mba ho miaraka amin’ny olon-tiany ny roa taona. Hitako izy dia MANAMBADY roa herinandro taorian’ny nahatongavany. ‘Izaho dia monina ao amin’ny Valan-javaboary City, Utah, ary naka ny mpizaha tany any amin’ny trano fisotroana. Izy no monina any Cleveland, fa dia hita avy isika roa lehibe tao Indiana. Dia mikatona ny trano fisotroana ary nandany ny roa taona manaraka Skyping, Hiatrika ny Fotoana, ary manidina sy miverina manerana ny firenena mandra-izahay natao tamin’ny fo nifindra tany Cleveland. Nivady izahay, dia efa nitombo ho tia Ohio, ary manana ny zaza eny an-dalana. Izy no lehibe indrindra ny maha-olombelona dia efa fantatra. Micaela Mackenzie dia mpanao gazety mahaleotena misahana manokana ny fahasalamana, kolontsaina sy ny teknolojia, ary izy tsy mandray anjara amin’ny fampahalalam-baovao tahaka ny Fisorohana, ny Vehivavy, ny Fahasalamana, ny Endrika, ny Hamitaka Olona ny Fahasalamana, ny Jaona Hopkins Fahasalamana Review, sy ny maro hafa. Fahasalaman’ny vehivavy dia mandray anjara amin’ny isan-karazany ny fandaharana affiliate-barotra, izay midika hoe mety hahazo karama naniraka eo editorially voafidy vokatra vidiana amin’ny alalan’ny rohy retailer toerana
← Inona no fomba tsara indrindra mba hihaona rosiana tokan-tena ho an'ny fifandraisana matotra. Tokony fotsiny aho handeha any Rosia. EM
Watch online fakan-tsary ao Meksika →